Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha PON Iyo EOC | Shiinaha PON Iyo Warshad EOC
EOC Addoon EB-400/401 EOC Terminal: EB-400-B / EB-401-B
Qalabka terminalka EOC ee madaxa bannaan. Tiknoolajiyada HomePlug AV / IEEE 1901, waxay qaadatay Qualcomm AR7411 chip, waxay isticmaashaa bareeg hooseeya oo ka hooseeya 65MHz, waxayna lashaqeysaa qalabka taxanaha EC ee EOC madaxa-dhamaadka si loo xaqiijiyo gudbinta calaamadaha xogta Ethernet ee shabakada qaybinta coaxial. Ikhtiyaariga ah shaqada WIFI. Waxyaabaha soo-saarka 1. Xafiiska dhexe ee qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka mideysan ayaa la keenaa, qalabkuna waa furayaa oo ciyaaraa. 2.Provide 1 KABLE calaamadda isku dhafan aqbasho RF dekedda iyo 1 signal TV saarka RF p ...
FTTH GPON ONU ZM2 Taxanaha
Hordhac 1. FTTH GPON ONU taxane ah. 2. Cabbirka is haysta, taageerayaal la'aan iyo buuq la'aan. 3. Hawlaha hodanka ah ee hawl fudud iyo dayactirka. Waxay korsadaan softiweer furan iyo qaab dhismeedka qalabka dhismaha si loo buuxiyo shuruudaha isku halaynta, joogtaynta iyo amniga qalabka darajada side. Waxaa lagu heli karaa qeexitaanno kala duwan waxayna ku habboon tahay dhacdooyinka FTTH. Astaamaha 1. U hoggaansamaya heerka ITU-T G.984 GPON. 2. Khariidad debecsan oo u dhexeysa GEM Port iyo T-CONT. 3. Taageero ...
ZJ5610-GL Taxanaha Smart Kaset GPON OLT
Dulmarka Wax soo saarka ZJ5610-GL waa cajalad yar oo karti iyo qaab kobcin ah GPON OLT, oo buuxineysa shuruudaha ITU-T G.984 / G.988 iyo heerarka qaraabada ah ee Shiinaha Telecom / Unicom GPON, oo leh awood marin GPON ah, isku haleyn heer side iyo howlaha amniga oo dhameystiran. Waxay ku qancin kartaa shuruudaha helitaanka fiilada masaafada dheer iyada oo loo eegayo maamulkeeda wanaagsan, dayactirka iyo kartida kormeerka, astaamaha adeegga badan iyo habka isku-xirnaanta dabacsan. ZJ5610-GL wuxuu noqon karaa ...